Nrọ Malta Ugbu a, Na-eme njem na-emechi emechi ezinụlọ niile ọzọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Nrọ Malta Ugbu a, Na-eme njem na-emechi emechi ezinụlọ niile ọzọ
Sistermụ nwanyị nwanyị Malta dị na Malta, Gozo, na Comino na-enye ihe omume na-enye obi ụtọ ma na-akpali akpali maka ezinụlọ dum ịbanye na afọ. Malta na-enye ọdịbendị pụrụ iche na afọ 7,000 nke akụkọ ihe mere eme iji nyochaa site na ọtụtụ saịtị akụkọ ihe mere eme, na-ekwe nkwa na ndị ọbịa nwere mmasị nke afọ niile. Udiri agwaetiti nke dị nso na gburugburu mmiri na ihu igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'oge niile dị mma maka mmemme a na-eme n'èzí nke enwere ike ịnụ ụtọ dịka ezinụlọ dị ka ịgagharị, ịrị elu, ịnyịnya, egwuregwu mmiri, mmiri mmiri, na ịnụ ụtọ osimiri mara mma.
Site na Bekee dị ka asụsụ gọọmentị, Malta na-eme ka ndị njem niile nwee nchebe na nnabata. Malta bụ onye amaara nke ọma maka ụtọ ya na-atọ ụtọ ma nwee ọtụtụ nhọrọ iri nri, site na Michelin nwere ụlọ oriri na ọ toụ toụ na nri n'okporo ámá mara mma, nke ga-emeju agụụ nke onye ọ bụla n'ime ezinụlọ. Agwaetiti ndị ahụ na-enye ebe obibi dịgasị iche iche site na ụlọ mmefu ego wee nwee ọnụ ụlọ oriri na nkwari akụ ise na ebe ezumike na Palazzos nkeonwe nke enwere ike ịgbazite maka ezinụlọ niile. Malta dị mfe iji ụgbọ ala na ịnyịnya ígwè ndị a ga-akwụ ụgwọ na obere ụgbọ mmiri ga-esi n'otu agwaetiti gaa na nke ọzọ, zuru oke maka ezumike ezinụlọ nke ọtụtụ agbụrụ.
Ezinụlọ na Malta
Ndepụta ebe nkiri Malta maka ezinụlọ dum
Ihe Omume nke Ezinaụlọ
Letdị Ndị Agha Valletta Septemba 19- 21 Ndị agha na-agbakọta iji nye ihe ngosi dị egwu maka ndị na-ege ntị na afọ niile
Airshow nke Malta International September 26 na 27 Ngosipụta ikuku dị egwu nke ikuku na-eme na ọdụ ụgbọ elu Malta
Malta Car Omuma Ọktọba 8- 11 Omuma ụgbọala na ngosipụta na na breathtaking mma na ndabere
Mbata- Hits nke Abba November 7 na 8 World toro gbalaga ARRIVAL ga-eme ABBA akụrisị ka Fans nke afọ niile
Ememme Ememme Mba Mba Malta Septemba 25- 27 Ihe ngosi na ihe ngosi nke ndi otu ndi mmadu, ndi ozo na ndi mmadu na-eme gburugburu agwaetiti a
Notte Bianca October 3 Kwa afọ nka na omenala ememme na ọkụ na Valletta cityscape
Malta International Christmas Choir Ememme Disemba 4-6 Egwú dị iche iche ga-arụ ọrụ na gburugburu gburugburu Maltese Islands
Pụrụ iche Adọrọ Mmasị Gaa na
Obodo nta Popeye
Ogige Osimiri Mediterranean
Ogige Egwuregwu Playmobil
Osimiri na Enyi na Enyi na Enyi
Oke Osimiri Blue, Ọdọ mmiri, Ọdụ ụgbọ mmiri Mellieha, Ghajn Tuffieha, Ogige George, Anchor Bay
Gbọ njem & Yachting
Etgbọ mmiri Jet
Nri iri na Malta
Malta na-enye nhọrọ iri nri magburu onwe ya site na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ speciụ ndị ọkachamara na ọnụ ala mpaghara na nri nri mmụọ nke Mediterranean.
Lọ oriri na ọụụ na Malta, Nri Malta
Michelin talọ oriri na ọtaụ Maltaụ Malta
Hotels sitere na site na nnukwu ebe a na-ewu ewu mba ụwa na obere ụlọ ezumike nke obere ezinụlọ
Ugbo ala holọ ndị a gbanwere agbanwe na ọdọ mmiri nkeonwe
Obodo/Ezumike ezumike dị maka mgbazinye
Ndị ọbịa ego dị ọnụ ala maka ndị njem na-eto eto